यी ३ काम गरेमा धरमा सधैं लक्ष्मीकाे बास हुनेछ ! – Allindiabc
Home/रोचक खबर/यी ३ काम गरेमा धरमा सधैं लक्ष्मीकाे बास हुनेछ !
यी ३ काम गरेमा धरमा सधैं लक्ष्मीकाे बास हुनेछ !
महिलालाई घरको लक्ष्मी मानिन्छ । महिला जसको घर जान्छिन् त्यस घरको परिवारको भाग्य र सफलता उनीसँग जोडिएको मानिन्छ तर ज्योतिष शास्त्रका अनुसारयी केही यस्ता कामहरु हुन्छन् जसलाई महिलाहरुले राति गर्नुहुँदैन । यसका कारण उनीहरुको समेत भाग्य फेरिने गर्छ ।
१. सुर्यास्त पछि महिलाहरु कसैको घरमा पनि दुध, दही, नुन, तेल र प्याज लिन जानु हुँदैन । यसो गर्नाले उनीहरुको जीवनमा बाधाहरु आउने गर्छन् र धेरै कष्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।२. ज्योतिष शास्त्रका अनुसार महिलाहरुले सुत्नु अघि कपाल नुहाउनुहुँदैन । यस्तो गर्नु हानिकारक हुन्छ ।
३. महिलाहरुले रातमा झठा भाँडाहरु भान्छामा राख्नुहुँदैन । यसो गर्नाले लक्ष्मीको बास घरमा हुन्छ भने वैभव, सम्पन्नता घरमा आउँछ । यी काम गरेमा फाइदा हुनेछ– ज्योतिष शास्त्रका अनुसार घरकी महिलाले हप्तामा एकपटक घरमा रहेका सबै कोठामा कालो नुन पेपरमा बेरेर राख्नु पर्छ । यस पश्चात बिहान उठेपछि कसैसँग नबोली कागजमा राखिएको नुनलाई बाहिर फाल्नुपर्छ ।
यसले घरमा उत्पनन भएका नकारात्मक उर्जा बाहिर निकाल्न मदत गर्छ ।– रातमा सुत्नुअघि घरभित्र रहेको कुच्चो दक्षिण पश्चिम दिशामा लुकाएर राख्नुपर्छ । यसले धन लाभ गर्छ ।– राती सुत्नुअघि भान्छामा एक बाल्टी पानी भरेर राख्नुहोस् । यसले घरमा सुख–समृद्धिको बास गराउँछ । खाली बाल्टी राख्नुले घरमा चिन्ता भर्ने काम गर्छ ।
अन्य समाचार,काठमाडौं। संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेका २२ जना नेपाली कामदारहरूमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ। युएईको सारहजास्थित एक सफाइ कम्पनीमा कार्यरत २२ नेपाली महिला कामदारमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको हो। उनीहरूमा एकै पटक सङ्क्रमित देखिएको हो।
स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा . सञ्जीव सापकोटाका अनुसार नेपालीका मुख्य श्रम गन्तव्य अर्को देश यूएई ५ सय नेपाली सङ्क्रमित भएका छन् । यस्तै अहिलेसम्म साउदीमा १ हजार ३ सय ६४, बहराइनमा ३ सय ३१, कुवेतमा ८४, मलेसियामा ५५ जना नेपालीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
यस्तै समितिका संयोजक डा. सापकोटाका अनुसार यो सातामात्रै यूएईमा थप ९ जनासहित कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या १८ पुगेको छ ।
यस्तै साउदीमा यो साता ५ जनासहित अहिलेसम्म ७ जना नेपालीको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ । बहराइनमा १, स्वीडेनमा १, कतारमा १ र कुवेतमा १ जना नेपालीको ज्यान गएको स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ ।
धन,सम्पत्ति र जागीर प्राप्तिका लागि जप्नुस् यी मन्त्र
पाथीभरा माताको दर्शन गरि हेर्नुहोस आइतबारको राशिफल
प्रेमीलाई खुशी पार्नका लागि यी युवतीले गरिन यस्तो अचम्मको काम ! देखेर सबैको होस उड्यो
मलेसियामा चार हप्ता थप लकडाउन
पैसाको अभाव भइ रहन्छ ?? अपनाउनुहोस यी ४ उपाय जसले लक्ष्मीको कृपा बर्षन सुरु हुनेछ
सात दिन भित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ। ॐ लेखि सेयर गरौं (7,582)
भाग्यमानीले मात्र देख्ने सुन रङ्गको नाग देवतालाई देखेको ३ सेकेन्डमा कमेन्टमा ॐ लेखी सेयर गरेमा मनोकामना पुरा हुनेछ !!! (6,575)
यी ३ काम गरेमा धरमा सधैं लक्ष्मीकाे बास हुनेछ ! (4,050)